Iesmụ nwanyị.Ebumnuche bụ ijide ma ọ bụ kpọnwụọ ndị na-emegide ya. Onye ọkpụkpọ egwu nke na-eri nri nke ọ bụla n'ime ndị iro ahụ meriri egwuregwu ahụ. Anyị na-ekwu maka otu egwuregwu mbadamba amara nke ọma na igwu egwu na mbara ụwa.
Egwuregwu ndị nyocha na-eme n'etiti ndị egwuregwu abụọ, na bọọdụ nwere akụkụ, nke oghere iri isii na anọ na-agbanwe ọkụ na ọchịchịrị, yana iri na abụọ na-acha ọcha na iri na abụọ oji.
Ndị na-enyocha ego: Kedu ka esi egwu nzọụkwụ site na nzọụkwụ?
Iji kpọọ ndị na-enyocha ego na ntanetị n'efu, naanị ị ga-egwu egwu gaa n'ihu ntuziaka ndị a:
Ozugbo ị banyere saịtị ahụ, a ga-egosipụta egwuregwu ahụ na ihuenyo ahụ. Kwesịrị naanị kụrụ egwuregwu na ị nwere ike ugbu a na-amalite na-ahọpụta nhazi na-amasị gị. Ga - enwe ike ịhọrọ n’etiti igwu egwu gị na enyi gị, ma ị họrọ ya, ị ga - enwe ike ịmalite igwu egwuregwu ahụ.
Ugbu a, ị ga-ahụ ụfọdụ bọtịnụ bara uru. Nwere ike "Tinye ma ọ bụ wepu ụda ", nye bọtịnụ "Play"Ma malite igwu egwu, ị nwere ike"Kwụsịtụ"Ma"Malitegharịa ekwentị”N’oge ọ bụla.
Mee ka onye mmegide gị kwaga mana iberibe.
Mgbe i dejupụtara egwuregwu, pịa “Malitegharịa ekwentị”Iji malite ọzọ.
Egwuregwu ndị na-achọpụta ego: atụmatụ
"ladies"bụ egwuregwu mbadamba nke dị adị kemgbe ọtụtụ narị afọ na nke a na-etinye nzọ na-aga n'ihu ma nwee ike ịnara ndị iro ahụ. Win merie mgbe onye iro ahụ enweghị mpempe akwụkwọ ma ọ bụ kpaliri ya ka ọ gharazie ịkwaga.
Nzube nke egwuregwu "Ndị nyocha"
Ebumnuche nke "ụmụ nwanyị" bụ igbochi mmegide nke onye mmegide ma ọ bụ wepụ ọtụtụ iberibe na ọ gaghịzi enwe ike ịmegharị.
Ọnụọgụ nke ndị egwu, afọ na oge ịgba egwu:
Site na afọ 6
Atụmatụ nke chess
12 ọcha iberibe
Iwu dị mfe ma ya mere dabara na ndị egwuregwu bọọlụ, mana ọ na-atọkwa ndị okenye ụtọ.
Akụkọ banyere "iesmụ nwanyị"
Eziokwu bụ na ọ dịghị onye maara kpomkwem mgbe ma ọ bụ otu ụzọ egwuregwu ahụ si malite, ma ihe doro anya bụ na ụmụ nwanyị anọwo na-adị ogologo oge, ọ bụ ezie Plato Ọ ghaara ya ụgha dị ka egwuregwu Gris gbazinyere Ijipt.
Echiche mbụ bụ na ụdị ochie nke Checkers bụ egwuregwu achọpụtara na ihe mgbe ochie igwu ala Ua, Iraq. Mkpakọrịta nwoke na nwanyị gosiri na egwuregwu ahụ dịrịrịrị ihe dị ka puku afọ atọ tupu a mụọ Kraịst.
Agbanyeghị, ụdị nke mbụ ae chere na ọ bụ bọọdụ dị iche, dị iche iche, na enweghị onye maara ihe iwu ndị ahụ bụ.
N’Ijipt ochie, a na-akpọ egwuregwu Alquerque, nke jiri bọọdụ 5X5, bụ egwuregwu metụtara ndị na-akwụ ụgwọ nke a na-egwuri egwu n'oge ahụ.
Ndị ọkọ akụkọ ihe mere eme kwuru na ọ malitere 1400 BC na ha na-azọrọ na ha ewu ewu dị ukwuu nke na Egwuru ya na mba ọdịda anyanwụ dum na ọtụtụ puku afọ na ọtụtụ puku afọ.
Gburugburu 1100 AD, onye France nwere echiche nke igwu ndị nlele na bọọdụ chess. Nke a pụtara ịgbasa ọnụ ọgụgụ iberibe ahụ ruo iri na abụọ n'akụkụ ọ bụla. A na-akpọ ụdị ọhụrụ a "Mmeghe"O nke ọma"Achịcha".
N'oge na-adịghị anya, ndị French chọpụtakwara na ime ka mmali dị mkpa mere egwuregwu ahụ ka ọ sie ike ma kpebie ịkpọ ụdị ọhụrụ a "Jeu ike".
A na-ahụta mgbanwe ochie dị ka egwuregwu egwuregwu maka ụmụ nwanyị ma kpọọ ya "Le Jeu Plaisant De Dames" (Egwuregwu Na-atọ oftọ nke Ndị Na-enyocha).
Site na tebụl ruo na kọmputa
Site na iwu ndị Checkers kọwara site na French, eburu egwuregwu ahụ gaa England na America, na-aga n'ihu na-achịkwa ụwa. Na G. Brittany, ọ natara aha " Nkọwa "na ama mgbakọ na mwepụ William Payne dere akwụkwọ ya banyere ịgba chaa chaa na iri na asaa na iri ise na isii. Otú ọ dị, kemgbe ọtụtụ afọ, Damas anọgidewo na-ewu ewu.
Ya mere, emepụtara njedebe abụọ maka ndị egwuregwu nwere ahụmahụ, na-amanye ha ịmalite egwuregwu ahụ na enweghị usoro. Taa, a na-eji ikike ịgba ọsọ 3 mee ihe na asọmpi.
Iesmụ nwanyị bịara na ntanetị nke ndị mmemme kọmputa ọbụlagodi ugbua tupu Agha Worldwa nke Abụọ.
Ọ bụ ezie na kọmputa nọ n'ọnọdụ siri ike nke mmepe, ọ rụpụtara ihe Alan Turing mepụtara usoro ihe omume maka ụmụ nwanyị nke chọrọ ka a gụọ akwụkwọ na akwụkwọ (n'ihi eziokwu ahụ bụ na igwe ahụ enweghị ike ịrụ ọrụ ahụ).
N'ikpeazụ, 1952 Ọ bụ afọ dị ịrịba ama na agba agba nke egwuregwu ahụ, mgbe Arthur L. Samuel kee ihe mmemme izizi mbụ eji kọmputa. Nke nta nke nta, mmemme egwuregwu a ka mma ka ọsọ na ikike nke kọmputa na-abawanye.
Na July XNUMX, otu otu Mahadum Alberta nke Jonathan Schaeffer duziri kwupụtara na ha edozila egwuregwu nke ndị na-akwụ ụgwọ.
Usoro ihe omume ahụ Chinook , nke mepụtara site na ihe nile, eruola isi na mmalite ya nke gosipụtara na ọ enweghị atụ. N'ụzọ dị otu a, ndị otu ahụ gosipụtara na Checkers bụ egwuregwu egwuregwu, ya bụ, ọ ga-akwụsị na ntanye ọ bụrụ na ndị mmegide ahụ emee ihe ziri ezi.
Agbanyeghị, egwuregwu ahụ na-ejigide ewu ewu ya, ebe ndị mmadụ si n'akụkụ ụwa niile na-egwu nsụgharị ya dị iche iche maka ntụrụndụ, na-azụ echiche ezi uche dị na ha, ma ọ bụ na-ekpori ndụ oge iji soro ndị ezinụlọ na ndị enyi na-egwuri egwu.
Etu esi egwu "checkers"?
Otu onye ọkpụkpọ na-enweta iberibe ọcha, onye nke ọzọ na otu n'ime iberibe ojii: onye na-egwu agba, ndị egwuregwu 2 nwere ike ịhọrọ n'etiti ha.
Iberibe na-etinye na outermost ahịrị nke egwuregwu mbadamba na-eche ihu.
Mgbe niile na ọnọdụ niile na-amalite site na iberibe ọchịchịrị.
Kedu ka esi egwu ya?
Iberibe ya bụ mgbe niile na ọnọdụ niile etinyere oblique uzo a ubi chere ihu. Ọ bụrụ na nkume dị n'ọhịa, enweghị ike ijide ya, n'agbanyeghị agbanyeghị nke gị ma ọ bụ nke onye iro gị nọ n'ọhịa.
Ọ bụrụ na ị gafee square nke nwere oghere ojii na okwute na-abụghị, ị nwere ike ịhapụ ya na njem ọzọ, ọ bụrụhaala na square dị n'azụ nkume ahụ ka tọgbọ chakoo. Na-awụli elu na-emegiderịta ibe na mgbe ahụ ị nwere ike-ewepụ ha nke egwuregwu. A machibidoro ịwụli iberibe iberibe gị. Ighaghi laghachi azu ma e wezụga na nwanyị ahụ.
Ọ bụrụ na ị iru ahịrị elu nke onye iro gị na nkume gị, nke player na-enweta a eze nwaanyị onye nwere ike ime ihe site na ọnọdụ a na ntụgharị ọzọ.
La dama na-egosipụta ịtụkwasị 2 iberibe otu na ndị ọzọ. Maka nke a ị chọrọ a otu nke diri ewepu ya na egwuregwu.
Uru ya bụ na nwere ike ime ihe ihu na ihu azụ iji aka adịghị mma, ya bu, inwere ike imeghari otutu uzo ihu ma obu ihu n’iru dika ichoro. Gluing mpempe akwụkwọ na-eme otu ụzọ. Ọ bụla ọkpụkpọ ọkọkpọhi a kacha nke otu eze nwaanyị. Ọ bụrụ na eze efunahụ gị n'ihi enweghị nlebara anya, ị nwere ike nweta nwanyị nke abụọ.
Onye ọkpụkpọ nke bụ onye mbụ na-emeghị njem ọ bụla furu efu.
Gịnị bụ nzube nke "nwanyị"?
Ga-ọ bụla ọ bụla nke na-abụghị mmegharị nke gị onye iro eti ma ọ bụ igbochi ya iberibe.
Kedu ka esi enweta "Dama"?
Ọ bụrụ na onye mmegide ahụ enweghị mkpali ọzọ, ị merie.
Whomnye ka “Nwanyị” ahụ dabara?
Egwuregwu ahụ "Daae" bụ nke a bu ndi egwuregwu choro ka ha nwaa uzo abuo ha. Ọ na-ewu ewu site na afọ isii.
Ego ole ka "Nwanyị" ahụ na-eri?
Dabere na onye nkesa na ụdị, "Dame" na-agbanwe n'etiti euro iri maka egwuregwu dị mfe na 63 euro maka ezigbo ụdị.
Gịnị dị mkpa maka "Nwanyị" ahụ?
Na atụmatụ, usoro eji eme ihe, na ịtụgharị uche tupu oge amalite ịmalite ụgbọ oloko amamihe.
A na-agbachi ịkụ azụ na "Checkers"?
Eeh, ọ bụrụ n’ịnwere ike ịpinye, ị nwekwara ike mado site na otu akụkụ .
Ofdị ụmụ nwanyị
Queen enweghị njide: eze nwanyị na-agagharị diagonally, na-agafe oghere efu ọ chọrọ, na-eche ihu ma ọ bụ na-eche ihu n'azụ, na-enweghị iwere mpempe akwụkwọ ọ bụla na-aga n'ụzọ ya enweghị ike ịgbanwe nke ahụ.
Queen nwere njide: ma ọ bụrụ na e nwere ibe ọzọ na diagonal gị, ụda nke onye mmegide, a ga - eme njide ma ọ bụrụ na e nwere otu ma ọ bụ karịa oghere na - enweghị ihe ọ bụla n’azụ ibe onye ahụ, njide ahụ bụ iwu. Achọghị eze nwanyị ka ọ gaa n'ihu na saịtị mgbe e jidere ya. Ọ makwaara nke ọma n'ụwa niile, ọ bụ n'etiti egwuregwu ndị ama ama dịka: chess, checkers na domino.
Ndị na-enyocha China
Ndị China Checkers nwere kpakpando nwere ọnụ ọgụgụ isii nke jikọtara ọnụ. Ebe ahịrị jikọtara, ya bụ, na isi, a na-etinye ibe. Ihe mgbaru ọsọ bụ megharia taịl 15 ahụ na-eche ihu kpakpando ahụ n'ụzọ kpọmkwem.
Mụ nwanyị Italy
Iwu ndị a yiri nke ụmụ nwanyị ọdịnala, tinyere mgbanwe ndị a:
A na-etinye bọọdụ ahụ na square ọcha n'akụkụ aka ekpe.
Nweghị ike ịme eze nwanyị.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ewereghị otu mpempe mgbe enwere ike, ha ga-efunahụ egwuregwu ahụ.
Lamụ nwanyị Bekee
Kpọmkwem otu iwu dị ka taịl ọdịnala, belụsọ nke ahụ ihe ọkpụkpọ nwere ike ịhọrọ ijide mpempe ọ bụla ma ọ bụghị nhọrọ kachasị mma site na ọrụ. Naanị uru nke eze nwanyị karịa ibe ya bụ ike ịkwaga ma weghachite ihu na ihu ihu.
Lamụ nwanyị Russia
Naanị mgbanwe sitere na iwu gọọmentị bụ eziokwu na agbapụ adịghị amanye yana eziokwu ahụ bụ na, n'ihe banyere usoro ịgba, ọ bụrụ na mpempe ahụ gafere n'ahịrị ikpeazụ, a ga-akwalite ya maka eze nwanyị ma ga-aga n'ihu. egwuregwu dị ka eze nwaanyị.
Mụ nwanyị Turkey
Eleghị anya ụmụ nwanyị ọdịnala kachasị dị egwu.
Jiri dashboard asatọ ugboro asatọ. Onye ọkpụkpọ ọ bụla nwere mpempe iri na isii wee debe ha na mbido ahịrị abụọ na nke atọ kacha dịrị ha nso.
Mpekere ndị ahụ na-agagharị n'ụzọ ziri ezi, n’akuku ma obu ihu n’iru, ma o dighi azu.
A na-ejide azụ ahụ n'ihu ma ọ bụ chee ihu n'akụkụ. Iberibe nke na-ejide junto ka onye nke ejidere na mbụ, nke a na-egbochi ozugbo (n'oge mmegharị ahụ, ọ bụghị na njedebe nke ya).
Mgbe otu ibe rutere n’ahịrị ala abụrụ eze nwanyị.
Ndị Queens nwere ike ịkwaga n'ámá efu dị ka ha chọrọ ihu ihu, ihu azụ ma ọ bụ ihu n'akụkụ.
Nchụkwudo nke Nwanyị Nwanyị bụ otu ihe ahụ dịka mpempe akwụkwọ nkịtị, belụsọ inwe ike ịwụli n'ahịrị oghere efu ruo mgbe ha ruru.
Mgbe ọ bụla enwere ike, Achọpụtara azụ ahụ bụ iwu nke a ga-emerịrị iji wepu ọtụtụ iberibe onye iro dị ka o kwere mee.
A na - enweta mmeri site na ijide onye ọ bụla n’ime ndị iro ya, na - eme ka ọ ghara ịhapụ ya ma ọ bụ hapụ ya, nke kachasị, otu megide Queen.
Mgbanwe nke iwu bụ otu ihe ahụ na egwuregwu gọọmentị, mana na mgbanwe a, onye gbajiri oso merie. N'ihi ya, onye ọkpụkpọ ahụ ga-enye ndị na-emegide ya ngwa ngwa o kwere mee.
Iwu Ladmụ nwanyị Official
Egwuregwu na ndị egwuregwu
Iesmụ nwanyị bụ egwuregwu ọgụgụ isi na-egwuri egwu n'etiti mmadụ abụọ.
Site na nkọwa, ndị a bụ ndị egwuregwu.
3. Egwuregwu nke ndị na-enyocha ego a na-egwu ya n’elu bọọdụ nwere akụkụ anọ, kewara n'ime 100 nha nha, na alternately ìhè na ọchịchịrị.
A na-akpọ ya n'ụlọ ndị gbara ọchịchịrị, a na-akpọ ya ụlọ ọrụ.
A na-akpọ usoro mgbapụta nke oghere ndị gbara ọchịchịrị gbara gburugburu, ya na ngụkọta nke 17. A na-akpọ akara ogologo kachasị ogologo na mkpokọta 10 na nke na-esonye n'akụkụ abụọ nke mbadamba nnukwu diagonal.
E debere bọọdụ ahụ n'etiti ndị egwuregwu ahụ, nke mere na nnukwu diagonal na-amalite n'aka ekpe nke ọkpụkpọ ọ bụla, yabụ akụkụ mbụ n'akụkụ aka ekpe nke ọkpụkpọ ọ bụla gbara ọchịchịrị.
4. The mbadamba enịm nwere esonụ aha:
ndọkwasi: n'akụkụ nke mbadamba na-eche ndi na-egwu egwu ma obu efere okpueze.
Tebụl: ogidi dị n'akụkụ.
Efere: ahịrị kwụ ọtọ na agba 5 gbara ọchịchịrị.
Kọlụm: vetikal edoghi na 5 ọchịchịrị kar.
5. Site na mgbakọ, a na-eji ọnụ ọgụgụ ndị gbara ọchịchịrị mee ihe site na 1 ruo 50 (Manoury edemede). Agaghị ebi nọmba a na tray. Na-ele anya na bọọdụ ahụ n’ihu, nọmba ahụ akọwapụtara na-amalite site n’aka ekpe gaa n’aka nri, malite na square gbara ọchịchịrị nke mbụ n’elu ogwe aka elu wee kwụsị na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị ikpeazụ n’elu ogwe aka dị ala (Diagram I).
Nwere ike ịchọpụta na:
Darklọ gbara ọchịchịrị ise na ntọala ma ọ bụ efere echichi na-anata nọmba nke 1 ka 5 na 46 ka 50.
A na-edeba igbe ise gbara ọchịchịrị na tebụl, ma ọ bụ ogidi mbụ na nke ikpeazụ 6, 16, 26, 36 na 46 n'aka ekpe, na nọmba 5, 15, 25, 35 na 45 n'aka nri.
A na-akpọ ụlọ ndị gbara ọchịchịrị ma dị oke na nnukwu diagonal akụkụ osisi.
6. The International Checkers egwuregwu na-egwuri na 20 na-acha ọcha ma ọ bụ doro anya na nkume na 20 oji ma obu oji.
7. Tupu mmalite egwuregwu, ihe Nkume oji 20 nwere oghere site na 1 ruo 20, na okwute ocha site na 31 ruo 50. Oghere ndị dị site na 21 ruo 30 ga-enwere onwe ha (Diagram 2).
Mgbanwe nke Akụkụ
8. Ibe bụ aha njirimara nke okwute na nwanyi.
9. Dabere na ha bụ nkume ma ọ bụ eze nwanyị, iberibe ahụ na-agagharị ma were ụdị dị iche iche. A na-akpọ ngagharị nke ụlọ site n'otu ụlọ gaa na nke ọzọ "nye".
10. Ihe mbu na mbu bu mbido onye ucha ocha. Ndị na-egwu egwu na-egwuri egwu na ibe ha, otu na-aga otu oge.
11. Okwute ga-aga n'ihu, na diagonal, site n'ụlọ ebe ọ na-adịgide n'ụlọ nweere onwe ya n'okporo ụzọ ọzọ.
12. Okwute rutere na okpueze okpueze ma nọrọ ebe ahụ na ngwụcha ngagharị na-akwalite eze nwaanyị Echichi na nkume akara nke ejiri akara site na overlapping nkume ọzọ nke nwere otu agba.
13. Ọ tụrụ aro ka onye mmegide mee ihe a.
14. Nkume ndị nwanyị chụpụrụ na-ejigide àgwà ahụ, mana o nweghi ike imeghari ma ghara ibo ya okpu eze.
15. Nwanyị a chiri eze ọhụrụ ga-echere ruo mgbe onye iro ga-egwuri egwu otu ugboro tupu ọ gwuo.
16. Nwanyị nwanyị nwere ike isi n’otu akụkụ gaa na nke ọzọ, site n’ụlọ ebe a dowere ya gaa na nke ọzọ, nke ọ masịrị ya, n’ihe osise nke ọ na-ebi ebe ọ nwere onwe ya.
A na-ahụta mmegharị nke ibe ahụ ka ọ gwụla mgbe onye ọkpụkpọ tọhapụrụ ya mgbe ọ bugharịrị ya.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ na-eme njem ahụ metụrụ otu n'ime mpempe akwụkwọ ọ na-egwu egwu, iwu ji ya ịkwaga ya.
Ọ bụrụ na ahapụbeghị nkume emetụtara ma ọ bụ na-akpụ akpụ, a ga-ahapụ ya itinye ya n'ụlọ ọzọ, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Onye ọkpụkpọ nwere nkwaghari nke chọrọ itinye otu ma ọ bụ karịa iberibe mbadamba n'ụzọ ziri ezi, tupu ịme ya, zere onye mmegide ahụ n'ụzọ doro anya "AJEITO".
17. Inweta ihe ndi ozo bu ihe a choro ma na-eme ma ihu ma azu. A na-agụ ihe nkiri zuru ezu dị ka otu ibugharị. Amachibidoro buru iberibe onwe ha.
18. Ọ bụrụ na okwute abata na kọntaktị, site na diagonally, ya na mpempe akwụkwọ na-abụghị, mgbe nke a gasịrị enwere oghere efu na otu diagonal, ga-awụlikwa elu ibe na ogide na free square. E wepụrụ ibe na-emegide ya na bọọdụ. Ọrụ a zuru oke, nke enwere ike ịme n'ihu ma ọ bụ azụ, bụ ogbugba nke nkume ahụ mere.
19. Mgbe eze nwanyị na ibe ya nọ na otu diagonal dị nso ma ọ bụ dị anya na ibe ha ma ọ dịkarịa ala otu square na-adịghị n'akụkụ ibe ya, eze-nwanyi aghaghi igabiga n'ofe nke ọzọ ma biri ebe ọ bụla n'efu mgbe mpempe akwụkwọ ahụ gasịrị, ihe ị họọrọ. Nwanyị a na-arụ ọrụ dị otú ahụ.
20.Ọpụpụ ga-adị n'ụzọ doro anya na n'usoro ziri ezi. Enweghi ihe ngosi doro anya nke ogbugba ya na njehie nke aghaghi idozigharị ya na arịrịọ nke onye iro ahụ. Na-ewere na-ewere okokụre mgbe mwepụ nke anụ ahụ ma ọ bụ na-emegide akụkụ.
21. Mgbe okwute ị jidere na diagonally na kọntaktị ibe ya, n'azụ nke enwere oghere efu, akụkụ nke abụọ ahụ ga-awụlikwa elu, wee bụrụ nke atọ na nke ọzọ, na-ewere ohere ohere mgbe nke ikpeazụ. kpalie. Mpempe nke ndị iro ahụ wee jide, mgbe ha mechara njem ahụ, ozugbo ewepụrụ osisi na ịrị elu ma ọ bụ na-agbadata n'usoro. A na-akpọ ọrụ a dum ihe nkedo nke okwute mere.
22. Mgbe eze nwanyị, mgbe ọ na-eburu, mgbe ọ gbagidịrị mbụ, nọ n'otu diagonal, nso ma ọ bụ n'ebe dị anya, site na nkume ọzọ na-abụghị nke ọzọ, nke dị n'azụ oghere ndị a ma ọ bụ karịa, eze nwanyị ga-agabiga mpempe nke abụọ a, wee gafee nke atọ na ihe ndị ọzọ wee biri ohere n'efu, na nhọrọ gị, mgbe mpempe akwụkwọ ikpeazụ jidere.
Mpempe nke onye iro ahụ weghaara, mgbe ịmechara njem ahụ, wepụrụ ya ozugbo na bọọdụ na ịrịgo ma ọ bụ ịgbadata n'usoro. Ọrụ a bụ olu nwanyị nke nwanyị na-agba.
23. N’ogige ụdọ a machibidoro iwu mafere ụlọ.
24. Na nkedo a na-agbụ agbụ, a na-ahapụ gị ka ị gabiga akụkụ efu karịa otu oge, mana ibe na-emegiderịta onwe ya nwere ike ịwụli otu oge.
25. A ga-egbu ihe nkedo yinye n'ụzọ doro anya, otu nke ibe, wụpụ site na ịwụ elu, ruo mgbe square ikpeazụ ruru. Enweghi ihe ngosi doro anya nke ogbugba ya na njehie nke aghaghi idozighari ya na arịrịọ nke onye mmegide ahụ.
26. Ngagharị nke ibe n’oge a igba ígwè na-ewere gụchara mgbe ọkpụkpọ agbadaala ibeMa obu na ngwụcha ma ọ bụ n’etiti ngagharị.
27. Iwere iberibe naanị ike wepụrụ si tree mgbe yinye ọgbụgba na-agwụ agwụ kpamkpam. The jidere iberibe a na-ewepụ ha ozugbo ọrụ ahụ kwusịrị na na ịrị elu ma ọ bụ na-agbadata n'usoro nke ha wuru,
Enweghị nkwụsị. Mwepu na-enweghị nsogbu nke iberibe mkpụrụ obi jidere na njehie nke a ga-edozi na arịrịọ nke onye iro ahụ.
28. Iwepụ iberibe a na-ewere dị ka ihe zuru ezu mgbe onye ọkpụkpọ wepụrụ nke ikpeazụ iberibe iwere ma ọ bụ mgbe Arụ ọrụ akwụsịla.
29. Inweta ọtụtụ iberibe o kwere mee na oghere igwe agbụ bụ iwu. Na itinye iwu a n'ọrụ, eze nwanyị anaghị ebute ụzọ ma ọ bụ tinye iwu ọ bụla. Na ogbugba, nwanyi na okwute no na ukwu.
30. Ọ bụrụ na iberibe ibe ahụ, n'ụzọ abụọ ma ọ bụ karịa, hara nha ọnụ ọgụgụ, onye ọkpụkpọ nwere onwe ya ịhọrọ nke ọ bụla n'ime ohere ndị a, ma ọ bụ iji okwute ma ọ bụ eze nwanyị, n'otu njide ma ọ bụ ọtụtụ.
31. Kwadoro na Nkeji edemede 3.5, Nkume na na a yinye gbawara bụ naanị na-aga site n'otu n'ime ụlọ nke na-abụghị nchigharị echichi crossbar, na njedebe nke kpọọrọ ọ ka bụ nkume.
Omume na-ezighị ezi
32. Ọ bụrụ na n'oge egwuregwu ọ na-achọpụta na e debere mbadamba na-ezighi ezi, na-atụle isiokwu 2.4, egwuregwu ahụ ga-kagburu ma malitegharia.
33. Ihe ndeputa nke edemede 2.8 ga-ekwenye tupu mmalite nke egwuregwu ahụ. Anomaly ọ bụla achọtara n'oge egwuregwu a ka edobere dị ka edemede 5.4.
34. Mpempe ọ bụla nọ na square adịghị arụ ọrụ (uzo) anaghị arụ ọrụ ma mesịa mechaa tinye ya n'ọrụ dịka ihe 5.4 si kwuo.
35. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ ahụ mere otu n’ime mmejọ ndị a, sọsọ onye iro ahụ ị nwere ikike ikpebi ma a ga-edozi mmebi iwu ahụ ma ọ bụ dozie ya. Mgbaghara:
36. Gwuo mmeghari abụọ n’ahịrị.
37. Mee mmegharị oge niile nke nkume ma ọ bụ nwanyị.
38. Gwuo otu nke gị iberibe ma kpọọ ọzọ.
39. Laghachi otu agbụrụ gbara.
40. Gwuo ibe onye iro ya.
41. Gwuo mpempe mgbe enwere ike ijide ya.
42. Wepu iberibe onye iro ma ọ bụ nwere osisi maka enweghị ihe kpatara ya.
43. Were ọnụ ọgụgụ dị ala ma ọ bụ karịa karịa nke iwu kpebiri.
44. Kwụsị tupu ngwụcha agbụ.
45. Wepu mpekere efere, ahapụghị ya, tupu plọg akwụsị.
46. ​​Wepu, mgbe ejidechara, erughị ọnụ ọgụgụ nke iberibe iwere.
47. Wepu, mgbe ijichara, akụkụ ndị a na-ewerebeghị.
48. Kwụsị adọpụta akụkụ n’elu oghere olu.
49. Emechaa nwude ya, wepụ otu ma ọ bụ karịa akụkụ nke gị.
50. Ọ bụrụ na, n’ihi ihe ọghọm, enwere a - mgbanwe ma ọ bụ iwepụ ọnọdụ na egwuregwu, eziokwu a, kwupụtara n'oge ahụ, enweghị ike iwere ya dị ka ihe na-adịghị mma.
51. Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ jụ ime ihe ndị masịrị iwu nke egwuregwu ahụ, onye mmegide nwere ikike ịmanye ya.
52. Otu ngagharị ọ bụla nke onye mmegide nke onye ọkpụkpọ mere nke nwere mmebi iwu ma ọ bụ onye jụrụ ido onwe ya n'okpuru iwu gọọmentị nke egwuregwu ahụ bụ ịnakwere ọnọdụ ahụ. N'ụzọ nke a, ikike imezi na-agwụ.
53. Ndozi ele mmadụ anya n'ihu nke a ezighi ezi ma obu mmebi iwu.
53. A na-ewere egwuregwu dị ka eriri mgbe egosiri otu ọnọdụ ahụ maka oge nke atọ na otu onye ọkpụkpọ ahụ nwere ọrụ maka mmegharị ahụ.
54. E kwupụtara na n’oge Mmegharị 25, naanị checkers Nkea mere, na-enweghị na-ewere ma ọ bụ na-akpụ akpụ na nkume, egwuregwu na-atụle dọtara.
55. Ọ bụrụ na enweghị ihe karịrị mkpụrụ atọ, mpempe abụọ na otu okwute, otu ibe ya na okwute abụọ n’ebe ibe ya nọ, a ga-ahụta nke ikpeazụ dị ka eriri mgbe ihe karịrị iri gafere.
66. Njedebe nke ndi eze nwanyi abuo, nwunye eze na okwute ma obu eze nwanyi megide eze nwanyi. ọ na-atụle a tie mgbe a kacha nke ise Nkea.
77. Ihe si n’otu egwuregwu nwere ihe abụọ:
Mmeri maka onye ọlụlụ, na n'ihi imeri nke ọzọ.
Jide mgbe ọ nweghị onye ọkpụkpọ na-ejikwa mmeri.
78. Onye ọkpụkpọ meriri mgbe onye iro:
Inwe mmegharị ahụ, ịnweghị ike igwu egwu.
Ifuola iberibe niile.
Jụrụ ime ihe iwu kwuru.
79. Otu agbụ pụtara mgbe:
Ndị mmekọ ahụ na-ekwupụta ya site na nkwekọrịta nkwekọrịta.
Na-etinye ndokwa nke isiokwu 6.
Mgbe ndị egwuregwu ọbụla enweghị ike imeri.
80. Site n'iwepu nọmba site na 1 ruo 50, dịka isiokwu 2.6., Ọ ga-ekwe omume ịlele mmegharị nke iberibe, mmegharị site na mmegharị, ma na oji na ọcha, na-edekọ egwuregwu niile.
81. Ntughari mmeghari kwesiri ime dika ndia:
Nọmba ụlọ mbido nke akụkụ sochiri nọmba ụlọ mmalite nke akụkụ ahụ.
Nọmba abụọ a na-esochi akara ngosi (-) maka ije dị mfe.
Bụrụ na ịnara ọnụ ọgụgụ ha, a ga-ekewa ha (x).
82. Maka okwu doro anya, a na-eji ihe ịrịba ama ndị a dị mkpa iji gosipụta:
Egwuru egwu ma ọ bụ mmegharị siri ike:!
Ezigbo ma ọ bụ ezigbo ike ịnye: !!
Adịghị ike ma ọ bụ ihe ọjọọ na-enye 😕
Adịghị ike ma ọ bụ ogbenye na-enye:??
83. Enwere ike kwenye na n’egwuregwu ọbụla ụgwọ dịịrị onye egwuregwu ọ bụla -eme ka ụfọdụ mmegharị n'ime a oge ịgba.
84. N'okwu a, ndị egwuregwu ga-:
Yiri elekere pụrụ iche maka asọmpi ahụ.
Dekọọ mgbe ị kwagara, maka ma oji na oji, uzo zuru oke nke egwuregwu.
85. A oge maka egwuregwu dum.
86. N’okwu a, iji asọmpi asọmpi bụ iwu, mana achọrọ ederede.
87. Yiri elekere achịkwa iwu na ụkpụrụ asọmpi.